स्पकेट: सुरू गर्नुहोस् र निर्बाध रूपमा तपाईंको ईकमर्स प्लेटफर्मको साथ ड्रपशिपिंग व्यवसायलाई एकीकृत गर्नुहोस्। Martech Zone
स्पकेट: सुरू गर्नुहोस् र निर्बाध रूपमा तपाईंको ईकमर्स प्लेटफर्मको साथ ड्रपशिपिंग व्यवसाय एकीकृत गर्नुहोस्
सामग्री प्रकाशकको ​​रूपमा, तपाईंको राजस्व स्ट्रिमहरू विविधीकरण गर्न अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। जहाँ केही दशक पहिले हामीसँग केही प्रमुख मिडिया आउटलेटहरू थिए र विज्ञापनहरू आकर्षक थिए, आज हामीसँग हजारौं मिडिया आउटलेटहरू र सामग्री निर्माताहरू जताततै छन्। निस्सन्देह तपाईंले विज्ञापनमा आधारित प्रकाशकहरूले वर्षौंदेखि कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने देख्नुभएको छ... र बाँचिरहेकाहरूले राजस्व उत्पादन गर्न अन्य क्षेत्रहरू खोजिरहेका छन्। यी प्रायोजन, पुस्तकहरू लेख्ने, भाषणहरू गर्ने, सशुल्क कार्यशालाहरू गर्ने, र पाठ्यक्रमहरू डिजाइन गर्ने हुन सक्छन्।
एक अनदेखी स्ट्रिम सान्दर्भिक उत्पादनहरु संग एक अनलाइन स्टोर सुरु गर्दैछ। पोडकास्ट हुनु, उदाहरणका लागि, त्यो टेक अफ हुँदैछ टोपी, टी-शर्ट, र अन्य व्यापारिक सामानहरूसँग समर्थन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, सूची, प्याकेजिङ्ग, र ढुवानी ह्यान्डलिङ टाउको दुखाइ हो जसको लागि तपाईसँग समय छैन। त्यो जहाँ ड्रपशिपिंग एक उत्तम समाधान हो।
ड्रपशिपिंग के हो र यसले कसरी काम गर्दछ?
ग्राहकले तपाइँको स्टोरमा अर्डर राख्छ र तपाइँलाई X रकम भुक्तान गर्दछ। खुद्रा विक्रेता (तपाईं) ले आपूर्तिकर्ताबाट Y रकमको लागि त्यो उत्पादन खरिद गर्न आवश्यक हुनेछ, र तिनीहरूले वस्तु सिधै तपाईंको ग्राहकलाई पठाउनेछन्। तपाईंको नाफा बराबर छ = X - Y। ड्रपशिपिंग मोडेलले तपाईंलाई कुनै पनि सूची बिना नै अनलाइन स्टोर खोल्न अनुमति दिन्छ।
स्पकेट: भरपर्दो आपूर्तिकर्ताहरूबाट सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने उत्पादनहरू ब्राउज गर्नुहोस्
हामीसँग छ लेखिएको छ बारेमा छापिएको, विगतमा एक ड्रपशिपिंग आपूर्तिकर्ता, त्यो बजारमा एकदम प्रभावशाली छ। प्रिन्टफुलले ब्रान्डेड वा डिजाइन गरिएका समाधानहरू अनुकूलित र प्रकाशित गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। स्पकेट तपाईंसँग ब्रान्डिङ वा अनुकूलन क्षमताहरू नभएकोमा फरक छ... यो पहिले नै राम्रो बिक्री हुने प्रमाणित उत्पादनहरूको बजार हो।
स्पकेट यो अद्वितीय छ किनभने यो केवल एक आपूर्तिकर्ता होइन ... यो भरपर्दो, गुणस्तर आपूर्तिकर्ताहरु बाट हजारौं सर्वश्रेष्ठ बेच्ने ड्रपशिपिंग उत्पादनहरु को एक संग्रह हो। तिनीहरूसँग संयुक्त राज्य अमेरिका, EU र विश्वव्यापी रूपमा उत्पादनहरूको संयोजन छ, त्यसैले तपाईं धेरै बजारहरूमा अपील गर्न सक्षम हुनुहुनेछ - विश्वभर।
तिनीहरूको बजारले तपाईंलाई ढुवानी स्रोत, ढुवानी गति, सस्तो ढुवानी, सूची, मूल्य, सान्दर्भिकता, र श्रेणी द्वारा खोजी र क्रमबद्ध गर्न सक्षम बनाउँछ:
ट्रेन्डिङ कोटीहरूमा महिलाको लुगा, गहना र घडीहरू, घरपालुवा जनावरहरूको आपूर्ति, नुहाउने र सौन्दर्य सामग्रीहरू, प्राविधिक सामानहरू, घर र बगैंचाको आपूर्तिहरू, बच्चाहरू र बच्चाहरूको आपूर्ति, खेलौना, जुत्ता, पार्टीका सामानहरू, र थप समावेश छन्। सुविधाहरू समावेश:
नमूनाहरू: केही क्लिकमा ड्यासबोर्डबाटै अर्डर गर्नुहोस्। भरपर्दो ड्रपशिपिंग व्यवसाय निर्माण गर्न उत्पादनहरू र आपूर्तिकर्ताहरूको सजिलैसँग परीक्षण गर्नुहोस्।
द्रुत शिपिंग: Spcoket आपूर्तिकर्ताहरूको 90% अमेरिका र युरोपमा अवस्थित छन्।
एक स्वस्थ लाभ बनाउनुहोस्: स्पकेटले तपाईंलाई नियमित खुद्रा मूल्यहरूमा 30% - 60% छुट प्रदान गर्दछ।
100% स्वचालित अर्डर प्रशोधन: तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको चेकआउट बटन क्लिक गर्नुहोस्, र तिनीहरूले बाँकीको ख्याल राख्छन्। तिनीहरूले अर्डरहरू प्रशोधन गर्छन् र तिनीहरूलाई तपाईंको ग्राहकहरूलाई पठाउँछन्।
ब्रान्डेड इनभ्वाइसिङ: स्पकेटमा अधिकांश आपूर्तिकर्ताहरूले तपाईंलाई आफ्नो ग्राहकको इनभ्वाइसमा आफ्नै लोगो र अनुकूलित नोट थप्न अनुमति दिन्छ।
24 /7समर्थन: तपाईं दिनको कुनै पनि समयमा सन्देश पठाउन सक्नुहुन्छ, र हामी तपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ दिन तयार छौं।
स्पकेटसँग पनि सिक्नको लागि ड्रपशीपरहरूको सबैभन्दा ठूलो समुदायहरू मध्ये एक छ फेसबुक!
स्पकेटले सिमलेस एकीकरण प्रदान गर्दछ BigCommerce, Shopify, Felex, Wix, Ecwid, Squarespace, WooCommerce, स्क्वायर, अलीबाबा, अलीस्क्रेपर, र केएमओ पसलहरू।
स्पकेटको साथ सुरू गर्नुहोस्
खुलासा: म एक सम्बद्ध छु स्पकेट र यो लेख भर मा सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दै छु।
टैग: AlibabaAliScraperBigCommerceड्रपशिपिंग एकीकरणड्रपशिपिंग स्टोरड्रपशीपिंग आपूर्तिकर्ताEcwidफेसबुक समूहफेलेक्सव्यापारिकअनलाइन स्टोरशॉपिफाईवर्गवर्गपाठआपूर्तिकर्ताwixwoocommerce
फोनसाइटहरू: तपाईंको फोन प्रयोग गरेर मिनेटमा बिक्री फनेल वेबसाइटहरू र ल्यान्डिङ पृष्ठहरू सिर्जना गर्नुहोस्।